Ucoceko lwedatha: Isikhokelo esikhawulezayo sokudityaniswa kwedatha | Martech Zone
Ucoceko lwedatha: Isikhokelo esikhawulezayo sokudityaniswa kwedatha
NgoLwesihlanu, Matshi 12, 2021 NgoLwesihlanu, Matshi 12, 2021 UJaveria Gauhar
Ukudityaniswa kokuhlanjululwa kungumsebenzi obalulekileyo kwimisebenzi yeshishini njengokuthengisa ngokuthe ngqo kweposi kunye nokufumana umthombo omnye wenyaniso. Nangona kunjalo, imibutho emininzi isakholelwa ukuba inkqubo yokudibanisa ihlanjululwe kuphela kubuchwephesha be-Excel kunye nemisebenzi engenziwanga kangako ukulungisa iimfuno ezixineneyo zomgangatho wedatha.
Esi sikhokelo siza kunceda ishishini kunye nabasebenzisi be-IT baqonde inkqubo yokudibanisa, kwaye mhlawumbi babenze baqonde ukuba kutheni amaqela abo engasakwazi ukuqhubeka nokudibanisa nokucoca nge-Excel.
Yintoni inkqubo yokudibanisa umsebenzi okanye umsebenzi?
Hlanganisa ukuhlanjululwa yinkqubo yokuzisa imithombo emininzi yedatha kwindawo enye ngelixa kwangaxeshanye isusa iirekhodi ezimbi kunye nokuphindeka kumthombo.
Inokuchazwa ngokulula kulo mzekelo ulandelayo:
Qaphela ukuba lo mfanekiso ungasentla uneerekhodi ezintathu ezifanayo ezinemicimbi emininzi enxulumene nomgangatho wedatha. Emva kokufaka umsebenzi wokudibanisa kule rekhodi, iya kuguqulwa ibe yimveliso ecocekileyo nesinye njengomzekelo ongezantsi:
Emva kokudibanisa nokucoca iikopi ezivela kwimithombo emininzi yedatha, iziphumo zibonisa uhlobo oluhlanganisiweyo lwerekhodi yoqobo. Enye ikholamu [yeShishini] ifakwe kwirekhodi, ifunyenwe kolunye uhlobo lwengxelo.
Iziphumo zenkqubo yokudityaniswa kokucocwa zenza iirekhodi eziqulathe ulwazi olwahlukileyo olusebenzela iinjongo zedatha. Kumzekelo ongentla, xa ulungiselelwe, idatha iya kusebenza njengerekhodi elithembekileyo kubathengisi kwimikhankaso yeposi.
Ezona ndlela zilungileyo zokuDibanisa kunye neDatha yokuThengwa
Nokuba yeyiphi na ishishini, ishishini, okanye ubungakanani benkampani, ukudibanisa iinkqubo zokucoca kusebenza njengesiseko seenjongo zokuqhuba idatha. Nangona umsebenzi wawunomda kuphela kwindibaniselwano kunye nokupheliswa, namhlanje ukudityaniswa kunye nokucocwa kuguquke kwaba yindlela ebalulekileyo eyenza ukuba abasebenzisi bahlalutye idatha yabo ngokweenkcukacha.
Ngaphandle kwenkqubo isenziwa ngoomatshini ngoku ngoku ngokubanzi Ukudibanisa isoftware kunye nezixhobo, abasebenzisi basadinga ukugcina ezona ndlela zilungileyo zokudibanisa idatha. Ezi zilandelayo ndincoma kakhulu ukuba ulandele:
Ukuhlala ujolise kuMgangatho weDatha: Ngaphambi kokwenza ukudityaniswa kokucoca umsebenzi, kubalulekile ukucoca kunye nokumisela idatha, njengoko oku kuqinisekisa ukuba inkqubo yohlengahlengiso ilula. Ukuba udedupe ngaphandle kokucocwa kwedatha, iziphumo ziya kukudanisa.
Ukunamathela kwiSicwangciso esiliNene: Kwimeko apho inkqubo elula yokudibanisa idatha ayisiyiyo eyona nto iphambili kuwe. Kuyacetyiswa ukuba usete isicwangciso esiza kunceda ukuvavanya uhlobo lweerekhodi ozijongileyo ukudibanisa kunye nokucoca.
Ukulungiselela iModeli yeDatha yakho: Ngokubanzi, emva kwenkqubo yokuqala yokudibanisa, iinkampani zikhulisa ukuqonda okungcono kwemodeli yazo yedatha. Nje ukuba ukuqonda kwangaphambili kwemodeli yakho kuphuculwe, unokwenza ii-KPIs kunye nokunciphisa ixesha elichithwe kwinkqubo yonke.
Ukugcina iRekhodi yoLuhlu: Ukucoca uluhlu alunyanzelekanga ukuba ucime uluhlu ngokupheleleyo. Nayiphi na idatha yokudibanisa isoftware iya kwenza ukuba ugcine iirekhodi kwaye ugcine isiseko sedatha yotshintsho olwenziwe kuluhlu.
Ukugcina uMthombo omnye weNyaniso: Xa idatha yomsebenzisi ifunyenwe kwiirekhodi ezininzi, ukungangqinelani kuyajongana ngenxa yolwazi olwahlukileyo. Kule meko, ukudibanisa kunye nokucoca kunceda ukudala umthombo omnye wenyaniso. Oku kubandakanya lonke ulwazi oluyimfuneko malunga nomthengi.
Izibonelelo ze-Self-Service Merge Purge Software
Isisombululo esisebenzayo sokudala umthombo omnye wenyaniso ngelixa uqinisekisa ukuba ulandela ezona ndlela zilungileyo zisaseleyo, kukufumana isoftware yokudibanisa. Esi sixhobo siza kubhala ngaphezulu kweerekhodi ezindala kusetyenziswa ulwazi olutsha ngenkqubo yokusinda kwedatha.
Ngaphaya koko, ukuzisebenzisela ukudibanisa izixhobo zokucoca kunokwenza ukuba abasebenzisi beshishini bakwazi ukudibanisa kunye nokucoca iirekhodi zabo ngaphandle kokwenza ukuba babenolwazi olunzulu lwenkqubo okanye amava.
Isixhobo esifanelekileyo sokudibanisa isixhobo sokunceda sinokunceda abasebenzisi beshishini nge:
Ukulungiselela idatha ngovavanyo lweempazamo kunye nokuhambelana kolwazi
Ukucoca kunye nokwenza ukuba idatha ibekhona ngokungqinelana nemithetho yeshishini
Ukutshatisa uluhlu oluninzi ngokudibanisa ii-algorithms ezimiselweyo
Ukususa iikopi ezinenqanaba eliphezulu lokuchaneka
Ukwenza iirekhodi zegolide kunye nokufumana umthombo omnye wenyaniso
Akufuneki ukuba, kwixesha apho i-automation ibaluleke kakhulu kwimpumelelo yeshishini, iinkampani azinakukwazi ukulibazisa ukulungiswa kwedatha yezoshishino. Ke, ukudityaniswa kwedatha yanamhlanje / izixhobo zokucoca ngoku zibe sisisombululo seflegi yeengxaki ezindala ezinxulumene neenkqubo ezintsonkothileyo zokudibanisa nokucoca idatha.
Idatha yenkampani yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu- kwaye njengayo nayiphi na enye i-asethi, idatha ifuna ukukhuthazwa. Nangona iinkampani ziye zajolisa kwi-laser ekufumaneni inani elandayo lolwazi kunye nokuqinisa ukuqokelelwa kwedatha, idatha efunyenweyo iphela ishiyekile ukulala kwaye ithathe iCRM ebiza kakhulu okanye indawo yokugcina ixesha elide. Kwiimeko ezinjalo, idatha kufuneka icocwe ngaphambi kokuba ibe nokusetyenziselwa ishishini.
Nangona kunjalo, inkqubo entsonkothileyo yokudibanisa / yokucoca inokwenziwa lula ngesoftware yokumisa ngokudibanisa ekuncedayo ukudibanisa imithombo yedatha kunye nokwenza iirekhodi ezibaluleke ngokwenene.
I-Ladder yeDatha yinkampani yesoftware esemgangathweni yedatha enikezelwe ukunceda abasebenzisi beshishini ukuba bafumane okuninzi kwidatha yabo ngokuhambelana kwedatha, iprofayili, ukukhuphela, kunye nezixhobo zokuphucula. Nokuba iyahambelana nezigidi zeerekhodi ngokusebenzisa ii-algorithms zethu ezingahambelaniyo, okanye ukuguqula idatha yemveliso enobuchwephesha ngetekhnoloji ye-semantic, izixhobo zekhwalithi yedatha yedatha zibonelela ngenqanaba eliphezulu lenkonzo elingenakuthelekiswa nanto kushishino.
Khuphela isilingo sasimahla
tags: Ukucocwa kwedilesiidilesi ye-geocodingukuqinisekiswa kwedilesiidatha yecrmIinkcukachaUkuhlelwa kwedathainkonzo yokucoca idathaukucebisa ngedathaucoceko lwedathaileli yedathaUmdlalo wedathaUkwenza iprofayili yedathamgangatho wedathaUlawulo lomgangatho wedathadatatchishishini ledathaukukhuphelaidatha yeshishiniii-algorithms ezifanayodibanisa ukucocaumdlalo umdlaloirekhodi lokudibanisaidatha engaqinisekangaulwahlulo lwedatha olungacwangciswangaUkucocwa kwedatha okungacwangciswanga
UJaveria Gauhar, umbhali onamava we-B2B / SaaS ogqwesileyo ekubhaleni ishishini lolawulo lwedatha. Kwileli yeDatha, usebenza njengeSigqeba seNtengiso, esinoxanduva lokumilisela izicwangciso zokungena ngaphakathi. Ukwayinkqubo kunye neminyaka emi-2 yamava ekuphuhliseni, ukuvavanya kunye nokugcina usetyenziso lwesoftware.
Kutheni kukho ii-Banana ezingama-542 ezixhonywe kwiAmazon